Breaking News: Qof isqarxiyey oo weerar ka geystey dekada magaalada Muqdisho – SBC
Breaking News: Qof isqarxiyey oo weerar ka geystey dekada magaalada Muqdisho
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax & israsaaseyn xoogan ay ka dhacdey dekada magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay isku dayeen gudaha u galeen koox hubaysan oo qaarkood waxyaabaha qarxa ku xiran yihiin.
Nin ka mid ah kooxda weerarkaasi geysatey ayaa isku qarxiyey banaanka hore ee dekada magaalada Muqdisho ka dib markii ay celiyeen ama ay ka shakiyeen ciidamada dawlada KMG ee ilaalada ka haya kadinka hore ee dekada magaalada Muqdisho.
israsaaseyn dhexmartey ciidamada dawlada & ninka hubaysan iyadoo la soo sheegayo in markii dambe ninkaasi oo ay ku xirnaayeen waxyaabaha qarxa uu is qarxiyey, waxaana halkaasi ku geeriyoodey nin odey ah oo ka mid ahaa xoogsata dekada.
Maamulka dekada Muqdisho ayaa sheegay inay fashilyeen weerar isqarxin ah oo lagu doonayey in lala soo galo gudaha dekada magaalada Muqdisho.
Idaacad ku hadasha afka kooxda Al-Shabaab ayaa tabisey in weerar ay fuliyeen koox hubaysan ay gudaha u galeen dekada Muqdisho, waxaana ay sheegtey idaacadu in weerarkaasi uu yahay mid ku jihaysan dekada Muqdisho.